Ny famerenana amin'ny laoniny ny toe-piainana manodidina ny haran-dranomasina dia zava-dehibe iray hafa dinihina amin'ity sehatra ity. Ny haran-dranomasina - na dia tontolo iainana manokana aza - dia mifamatotra akaiky amin'ny endrika manodidina azy ireo, ao anatin'izany ny toeram-ponenana an-dranomasina hafa toy ny fandriana ahidrano sy honko ary koa ny tany amoron-tsiraka. Ny isan'ny haran-dranomasina dia mety tsy hivoatra raha toa ka mandrahona ny haran-dranomasina vokatry ny fahalotoan'ny tany na ny fitsoahan'ny tany ny toe-piainana manahirana. Toy izany koa, ny isan'ny mponina manan-danja amin'ny trondro dia ahitàna ny ahitra sy ny honko ho an'ny toeram-ponenan-jaza kritika raha mbola tanora izy ireo.
Ny tetikasa famerenana amin'ny laoniny dia tokony hikatsaka ny famerenana maharitra ny fomba amam-panao sy ny tontolo iainana, toy ny famerenana ny fitrandrahana haran-dranomasina sy ny fitrandrahana ny vatohara, mba hampiroboroboana ny fari-dranon'ny vatohara salantsalany sy ny fanjakana ekosy. Sary © Tim Calver
Noho izany, ny fomba fijery mazava loatra amin'ny famerenana amin'ny laoniny ho an'ny haran-dranomasina izay maharitra sy maharitra dia tokony handinika sy hampiditra ny tontolo manodidina ireo toeram-ponenana ireo. Ity fizarana ity dia manome fampidiran-dresaka fohy amin'ireo fomba ireo, anisan'izany ny famerenana ny seagrass sy ny ecosystems mangatsiaka.